Jessica Chastain muAnotaura kuNyeredzi mu'I: Chitsauko Chechipiri '- iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Jessica Chastain muAnotaura Kutamba mu 'Izvo: Chitsauko Chechipiri'
Jessica Chastain muAnotaura Kutamba mu 'Izvo: Chitsauko Chechipiri'
by Kelly McNeely February 20, 2018 931 maonero
Sezvinotaurwa nezita Kusiyana-siyana, akasarudzwa kaviri Oscar Oscar Jessica Chastain ari munhaurirano dzekutungamira mune yaAndy Muschietti Iyo: Chitsauko Chechipiri semunhu akura Beverley Marsh.
Kunyangwe panguva ino hapana chakasainwa kana kusetwa mudombo, izvi zvinoratidza wekutanga kukanda (semi) chiziviso chevakuru vhezheni yeLoser's Club. Variety vanotaura kuti "mativi ese ari maviri akatanga kukurukura zviri pamutemo [Chastain] achiuya kuzobata chirongwa".
Iyo inogona kukandirwa yevakuru mavara anga ari iwo anopisa hurukuro yekukurukurirana pakati peanotyisa mafeni kubvira kubudirira kwemusango kwe It'' Kutanga kuburitswa.
Tinoda yakambotaurwa kuti Chastain akange achitarisa chinzvimbo uye mafeni anoita kunge anotsigira pfungwa iyi - kune akawanda mafirita-akagadzirwa maposta ayo akange amukanda saTev. Tichifunga nezve chokwadi chekuti mutambi ane tarenda akamboshanda naMuschietti muna2013 Mama - yakaburitswa naGuillermo Del Toro - zvine musoro kuti angave anokwikwidza pamusoro.
Amai kuburikidza neUniversal Mifananidzo
Muschietti anodzoka kunanga Iyo: Chitsauko Chechipiri nemunyori Gary Dauberman. Kana iyo firimu vhezheni ye It yakatanga kugadziriswa, bhuku rakashandurwa kuita script naDavid Kajganich. Cary Fukunaga (Chokwadi Detective Mwaka 1, aka yakanakisa imwe chete mwaka weTV wakambo, kurwisa ini) yakazorongedzerwa kunongedza uye kunyora zvekare script naChase Palmer. Mushure mekunge Fukunaga aenda uye chirongwa chakatorwa naMuschietti, Dauberman akaunzwa kuzobatsira kunyora zvekare script kuti ikwane chiono chaMuschietti kana iyo firimu.
Iyo script ye Iyo: Chitsauko Chechipiri ichiri mumabasa nekutora mifananidzo kutanga zhizha rino.
Zvekare, isu hatina chero saini-yakasainwa-yekukanda nhau (asi zvakachengeteka kufunga kuti tichaona kudzoka kwaBill Skarsgård sePennywise). Nekudaro, panguva ino, iwe unofanirwa kuramba uchinetsekana nechero maposta maposta aunoona sezvavanenge vakaita fan.
Semazuva ese, kudzamara ruzivo rwasimbiswa, tora zvese nehuyo yemunyu.
Zvirokwazvo fan yakaitwa
Izvo zvataurwa, sezvo nhau dzinouya, tichava nechokwadi chekukuchengeta iwe uchitumira! Iyo: Chitsauko Chechipiri yakagadzirirwa kusunungurwa munaGunyana 6, 2019.